राशिफल: माघ १६ गते आइतबार – Pahilo Page
राशिफल: माघ १६ गते आइतबार
१६ माघ २०७८, आईतवार ०७:२० 118 पटक हेरिएको
श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४२ राक्षस नामक संवत्सर शिशिर ऋतु वि.सं. २०७८ माघ १६ गते तद्अनुसार सन् २०२२ जनवरी ३० तारीख आइतबार माघ कृष्णपक्ष त्रयोदशी तिथि पूर्वाषाढा नक्षत्र हर्षण योग भद्रा करण आनन्दादिमा शुभ योग चन्द्रमा धनु राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ६ः५४ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १७ः४१ बजेमा हुनेछ । शहीद दिवस ।
मेष – आमोदप्रमोदमा रमाउनुहुनेछ । आय पनि वृद्धि होला । तथपि, साथीभाइहरु रुष्ट हुन सक्छन् । प्रतिस्पर्धामा पनि केही कमजोर सावित भइएला । चिताएको काम पूरा नहुन सक्छ । काममा कठिनाइ आइपर्ने हुँदा होसीयारी पूर्वक काम गर्नुहोला । यातायातका साधनबाट पनि जोगिनुहोला । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नेछ ।
वृष – मनोकूलको र नयाँ काम बन्नेछ । रुचिका विषयमा लगानी बढाउने समय छ । नसोचेको ठाउँबाट आम्दानी हुने दिन छ । सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन् । धन यश मान महत्व आरोग्यता बढ्नेछन् । शारीरिक र आर्थिक कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ । अरुको भर नपर्नु हितकर हुनेछ ।
मिथुन – परिवारिक सुख र उत्साह बढ्नेछ । आफन्तको साथ पनि मिल्नेछ । काममा जोश जांगर आउनाले मन प्रफुल्ल होला । व्यापार–व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई आर्थिक लाभ हुने दिन छ । मनोरञ्जनात्मक तरिकाबाट काम बनी मन हर्षित हुनेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनु हुनेछ । सुखको कर्ममा प्रवृत्ति बढ्नेछ । कार्यव्यापारमा प्रगति होला ।
कर्कट – ऋण रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुने भए पनि आफ्नै कमजोरीले विवादमा परिने योग छ । असमझदारी बढ्नेछ । मान्यजन वा अभिभावक वर्ग रुष्ट हुन सक्छन् । देखा परेको समस्याको समाधान खोज्नु हुनेछ तर कठोर परिश्रमले । कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय र ठुलो रकमको लगानीमा विचार राख्नुपर्नेछ ।
सिंह – प्रेममा सफलता प्राप्त हुनेछ । आशा उत्साह बढ्नेछ । ब्यापारमा भने लाभ मिल्ला । कामको सन्दर्भमा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ र मानसम्मान पनि पाइएला । प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । बौद्धिक रचनात्मक र कलात्मक काममा सफलता मिल्नेछ ।
कन्या – वार्तामा सफलता प्राप्त हुनेछ । धन मान महत्वमा कमी आउनेछैन । मान्यजनको आगमन पनि हुन सक्छ । स्वादिष्ट भोजनको आनन्द पाइएला । आफन्त र मित्रहरूसँग भेटघाट र रमाइलो गरिने छ । मान–सम्मान बढ्नेछ । सुखको अनुभुति हुनेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । अरुको भरभन्दा आफ्नै बलविवेकले काम गर्नु उचित हुनेछ । ऐनकानूनले साथ दिनेछ ।
तुला – सामान्यतया दिन ठिकै छ । कला, साहित्य, मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ । पारिवारिक सुख र समृद्धि वृद्धि होला । शुभ र भाग्यवर्द्धक काममा ध्यान केन्द्रित गर्नु बेस होला । रसरागमा रुचि बढ्नेछ । स्वास्थ्यमा सुधार होला । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । कार्यव्यपारमा सफलता प्राप्त होला । धन सम्पदामा बढोत्तरी हुनेछ ।
वृश्चिक – साहसिक काम बन्नेछ । मान महत्व बर्चश्व बढ्नेछ । वार्तामा सफलता पनि प्राप्त होला । तर खानपिनमा एकदमै सावधान रहनुपर्नेछ ।सानातिना काम र घरेलु समस्यामै अल्झनुपर्ने देखिन्छ । भौतिक साधनको क्षति हुन सक्छ । सोच्दै नसोचेको ठाउँमा धन खर्च हुन सक्छ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । योजना र बजेट बनाइ कार्य गर्नु बेस होला ।
धनु – सुख सफलता बढ्नेछ । अन्नधनमा वृद्धि हुनुको साथै आयस्रोतमा पनि बढोत्तरी होला । नयाँ जिम्मेवारी पाइएला । दैनिक कामकाज सजिलै सम्पन्न हुनेछन्, रोकिएका कामहरु बन्ने दिन छ । विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य काम बन्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । सन्तानसुख बढ्ला । प्रेममा सफलता प्राप्त होला ।
मकर – प्रेमपात्रसित भेटघाट हुनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम पनि बन्नेछन् । व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ साथै धनलाभ पनि हुनेछ । काम गर्न जाँगर चल्नेछ, उत्साहवर्द्धक समय छ । गीत संगीतमा आकर्षण बद्नेछ । आर्थिक समस्याको समाधान प्राप्त हुनेछ ।
कुम्भ – कुनै पनि प्रकारको शारीरिक र आर्थिक विकाससित सम्बन्धित कार्यमा सफलता मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य पनि बन्नेछ । आफन्तजनको सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ । अवसर आए पनि विचारेर मात्र नयाँ काम सुरु गर्नुहोला । रोकिएको काम बन्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला । यात्रामा सफलता प्राप्त होला ।
मीन – आफन्तको साथ मिल्नेछ । वार्तामा सफलता प्राप्त होला । स्वास्थ्यगत कमजोरीले भने सताउनेछ । मनमा घरायसी पीडाले डेरा जमाउन सक्छ । अनावश्यक रुपमा पैसा खर्च हुन सक्छ । साझेदारीको काम बन्नेछ । जोखिममा नपर्नु नै बेस होला ।